Forty Times More Precious Than Gold - Meteorites
Kenyataan "PM Secara Rasminya Meletak Jawatan" Kerja Orang Dalam?
The Conspiracy Chip
IOI Mall Puchong ground floor, LDP Highway: Flood!
I Don't Know What To Say Except Please Help If You Can.
Myanmar regime is using this tactic: “How To Brainwash A Nation”.
သေဖေါ် သေဖက်ပါ။ ရှင်ဖေါ် ရှင်ဖက် မဟုတ်ဘူးလား ?
Full weight of law must fall on Lahad Datu intruders by Mat Zain Ibrahim
Purple Cane Gardens Mid Valley: Kid loves the food
Ludu U Sein Win’s quote regarding abuses and rudeness
၁၄.၂.၁၃ နေ့က လာစစ်ဆေးပြီး စည်းကမ်းနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါလို့ပြောသွားတဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းက ဒီနေ့ ၁၇.၂.၁၃ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်ကြီးမှာ ဘောင်ကျော်လို့ ချက်ချင်းဖျက်ပေးပါလို့ဆိုပြီး စာထုတ်လိုက်တာ
Posted: 18 Feb 2013 10:56 AM PST
"Malaysian Prime Minister Officially Resigns" was the titled ofaposting (it was removed immediately when someone realised it) onagovernment's electronic newspaper yesterday.
Information Department director-general Datuk Ibrahim Abdul Rahman said it was believed that the department's electronic newspaper was breached by irresponsible party.
The 'breaking news' about PM Datuk Seri Najib Tun Razak's resignation was published by several electronic social networking media, including overseas.
Well... who was behind it? Inside job, probably?
A thorough investigation must be conducted and the culprit(s) should be reprimanded.
If it was meant asajoke, I don't find it amusing!
Posted: 18 Feb 2013 06:43 AM PST
Posted: 18 Feb 2013 09:43 AM PST
"Kita tahu Najib tidak berupaya lagi dapat sokongan rakyat. Orang kerajaan sendiri sudah pandai permainkan Najib.
Bagaimanapun, seronok hanya sekejap tetapi derita berpanjangan.
Kini mereka yang menginjak usia 17 tahun menyesal tak sudah kerana kesilapan silam pada usia masih mentah.
Jika dulu mereka berbangga didampingi ramai lelaki, diulit kemewahan dan mampu memiliki gajet canggih yang menjadi idaman rakan sebaya, kini semuanya tidak berguna lagi selepas Sally disahkan dijangkiti HIV positif. -hm
Waspadalah dengan tingkah laku anak-anak anda tatkala mereka berinteraksi di laman sosial.
Apatahlagi jika yang selalu bersms dengan rakan-rakan mereka yang anda tidak kenal
Posted: 18 Feb 2013 07:28 AM PST
It took Fei Poralong time to overcome the grief of losing her kittens. She would call out to them and sniff around the nooks and crannies that they like to play in. We grieved along with her as we were very fond of the kittens too.
On one of our trips to Ipoh, Wuan was enamoured byalittle white kitten that licked her fingers at the vet's where Fei Por was boarded. Fei Por licked him all over when Wuan put them together. With that tacit approval, we adopted him. Wuan named him Cheeky for his fondness of nipping at our fingers and toes.
Fei Por did not like to stay indoors. We let her live outside. In the afternoons, Cheeky would be by the door playing with Fei Por who would be sitting just outside. The few times that she came in, we could see the joy in Cheeky's antics.
Posted: 18 Feb 2013 07:09 AM PST
I was on my way back from work today when the traffic was jammed at the places that was usually clear. Miki's babysitter said there was an accident in front of IOI Mall and I secretly prayed nobody got hurt. I was so convinced that the accident wasahorrible one else it wouldn't have cause such bad congestion to the traffic in Kinrara.
Little did know that it was no ordinary car accident, it wasamassive flood!
Oh my gosh! We have stayed in Kinrara for7years in this is the first we are witnessing this:-
I got these pictures from Facebook. That's the Mall nearest to where we live, which is about 10 minutes away. We go there in our pajamas house clothes to grab something to eat, watch movies at GSC, karaoke or buy groceries. IOI Mall pretty much has everything like Sakae Sushi to TGIF, Wendy's to Ayam Penyet and Papa John's Pizza to Seoul Garden. It has Miki's favourite Starbucks too but wow! Even Starbucks and Jusco was flooded too?
This is quiteadisaster!
I think anybody who lives around the areas knows what pisses Mother Nature off – the LRT construction works. Don't you agree? They have been erecting those colossal LRT rail pillars and the station building without proper drainage that could withhold the unpredictable tropical rain we have in Malaysia.
The construction company or JKR must really look into this and ensure the next time it rains, such disaster won't happen again. Kalau tak susahla I nak pergi makan-makan kat IOI Mall nanti! haha
Posted: 18 Feb 2013 06:39 AM PST
Life is unfair! When I tell my husband about certain conspiracies that I come across in the Internet, his response is:
You cannot believe everything you read...
This evening he told me about an articleafriend posted about Obamacare and Microchip implants. I surfed the net vigilantly to find more evidence and came across THIS ARTICLE.
Do check it out to see the counter arguments.
Posted: 18 Feb 2013 06:16 AM PST
SOURCE> FB of Solonight Emparor
Nombor giliran 2087..lokasi nya HTAA Kuantan..jam pukul 11.20 malam pada 17hb Feb 2013.
Aswad dan ibubapanya telah berkejar ke hospital besar kerana Aswad mengalami sakit perut yang teruk..
Mereka telah membawa surat daripada klinik Syed Badaruddin di Berserah.
Doktor di situ telah mengesyorkan Aswad pergi mendapatkan rawatan emergency di HTAA.
Daripada pukul 11.20pm sampai 2.30 am ( 18hb Feb ), Aswad terbaring berselimut dengan gebar.
Sempat pergi tandas sampai4kali lagi..doktor yang bertugas berkata "tunggu giliran".
Ibunya mengadu kepada saya.."mengapa3orang yang datang kemudian daripada kitaorang tunggu tak sampai setengah jam tetapi dapat rawatan dulu..padahal kalau berbanding dengan Aswad, mereka kiranya sihat2..sorang Cina,2orang Melayu.
Komdian, nombor 2089 dia panggil dulu, nombor anak saya tak panggil2".
Dia bertegang leher jugak dengan doktor tentang layanan yang mengecewakan itu tetapi doktor berkeras jugak suruh tunggu giliran.
Akhirnya, mereka balik ke rumah tanpa sebarang rawatan.
Aswad disapu2 ubat sakit perut dan terus tidur.
Pagi ni bapanya telah membawanya ke Poliklinik Berserah..(this isasmall hospital..not as big and well equipped like HTAA..opened during office hours only.)
Ibunya bekerja asapart time house cleaner.
Dia mintak tolong pengalamannya di blogkan.
"Kak, tolong mintak perhatian Pengarah Hospital HTAA..nama dia Dato' Hjh Marlia..tanyakan mengapa saya diberi layanan buruk".
Takder kena mengena dengan politik yea.
Mereka ni semua ahli UMNO jugak.
Mudah2an pihak HTAA Kuantan dapat menyiasat perkara ini..harap2 doktor dan misi yang bertugas ada jawapan yang memuaskan..hampir3jam menunggu..tak kesian ker pihak hospital tengok budak 12 tahun dalam kesakitan?
Pihak HTAA check lah kenapa sampai gini..memang normal ker?
Posted: 18 Feb 2013 05:49 AM PST
TODAY on Faceb o o k News 新闻最前线
For news and photo of flood in IOI Mall, click on link below:
Flood at LDP Highway:
Despite my recent accident, I have been helpingagirl forafew weeks now. An old friend asked me to help this girl who has been living inashelter home for 11 years of her life. Her dad passed away and her mom abandoned her.
When she turned 18, she was discharged from the shelter and she got her bank book to her savings account which had more than 6000RM. Thereafter, she went to stay witharelative who subsequently secretly withdrew her money via her ATM card. Feeling helpless, she never dared to assert her claim to her savings as she needsaroof over her head andaroom to stay. Currently, she is in Upper Six inapremier secondary school.
Today, she met my other student whom I am helping - the nephew of my hairdresser. You can read about his sad story HERE. Well the good news about Chor Ding is that I helped him in MUET and he was the only boy in his school to score Band 5/6 in the November MUET. His English has improved by leaps and bounds and I confess it was not an easy journey but certainly worth the sweat and tears. I am thankful both of us did not give up on each other.
Today is my mother's death anniversary and instead of my annual pilgrimage to the sea of tears, I spent this evening encouraging the girl and to tell her that no matter what, she has to be resilient and to work hard. After the lesson, I asked her to stay back for dinner but she was just too shy. I asked if she had dinner at home and she said no. I wonder if the poor girl hasahot meal to enjoy each day. :-(
Truly, she cried and cried when I told her that hers is not the worst case I have seen and reiterated that at this point, she had to be strong and to really go all out to score in her STPM to increase her chances of gettingascholarship. Chor Ding is an inspiration for despite his circumstances, he excelled in his SPM and scored many A* (including English of course!) and I know in time, she will also beashining example to other less fortunate ones.
It isapity that she came to me at suchalate stage but I will try my best to help her. To cheer her up, I gave herapair of Doraemon bedroom slippers which I had bought for my younger son. The smile that reached her eyes when she saw the gift really litathousand light bulbs in my heart!
This girl has suchasweet character despite her tragic circumstances. However, she is in dire straits now and I wish there is someone out there who can help her. My friend has found someone who has been giving her pocket money onamonthly basis. It is saddening that because she lost her savings to that relative, inabid to recoup her losses instead of asserting her ownership of the $$$, she has been working part-time on weekends.
I am writing this post because ofafew reasons:
1. Is there anyone out there who is kind enough to give her some $$$ each month?
2. Can anyone in Penang offer heraplace to stay?? I do worry for her. Ifarelative is unscrupulous enough to siphon off her money, I dread to think what else could happen!
3. Can anyone give her some part-time work?
4. Can anyone in Penang offer any guidance in her studies? Previously, she was inaChinese secondary school and her foundation in many areas is weak.
5. Is there any other way anyone can help?
My heart goes out to her and I worry what may befall her in the future.
Please, if there is anyone out there who can help her in anyway, do write to me at :
Thank you for reading this post. Take care and God bless you.
Posted: 18 Feb 2013 04:38 AM PST
"We must not stand with folded arms admiring it, but do all we can to make it possible for others to live better in the future, since we could not possibly live."
-V.G. Belinsky, Selected Philosophical Works-
"Ditinjau dari sudut pandang ini, pemberontakan seni berarti seni menjadi media bagi terciptanya kebebasan. Dalam struktur masyarakat yang menindas, seni diciptakan sebagai media penyadaran bagi rakyat menindas, dan seni semacam ini jelas sekali keberpihakannya terhadap rakyat", demikian ujar Eka Kurniawan dalam tulisannya tentang Pramoedya. Mungkin ada antara mereka yang tidak setuju sisi pandang seni sebegini, bahkan boleh dikatakan sebagai mendesak dan melampau.
Bahawa ini terjadi tidak lain tidak bukan lahir daripada pegangan kita terhadap budaya secara keseluruhannya, dan seni dan sastera atau penulisan secara khususnya.
Budaya, apabila terbantut dan dirosakkan, menyebabkan seni dan sastra menjadi mandul dan seterusnya bisu ketika berhadapan dengan penindasan, ketidakadilan dan pemecahan solidariti yang berleluasa dalam masyarakat.
Kemandulan ini berlaku apabila, pertama, ia mendekati diri dengan kekuasaan dan dipergunakan untuk mempertahankan status quo, yakni kedudukan mereka yang memegang tampuk pemerintahan dan dengannya kekayaan ekonomi. Keduanya apabila ia dihasilkan semata-mata untuk melayani tingkah laku konsumerisme dan pasaran massa. Ada yang akan mengatakan bahawa ia tidak semestinya begitu dan setiap aliran mempunyai sasaran atau tumpuan yang khusus. Namun, penerbitan seperti ini membawa kesannya yang tersendiri seperti yang pernah dinyatakan di ruang dan tempat lain.
Dan ia mengalih tumpuan kita daripada kepercayaan bahawa seni dan sastra mempunyai peranan yang khusus, yakni fungsinya sebagai medan pertembungan idea dan saluran untuk membangkitkan kesedaran masyarakat. Mengambil sastra, ataupun apa bentuk tulisan, sebagai contohnya, ia mesti mempunyai ideologi. Ia harus mengambil pendirian – pendirian yang menjurus kepada kebersamaan dengan mereka-mereka yang dipinggirkan.
Dalam mengambil pendirian, maka wujudnya sastra yang melawan, sastra yang memberontak terhadap segala jenis norma, pemikiran, tingkah laku, dan kekuasaan yang mengekang dan membendakan manusia dan masyarakat. Dalam soal melawan dan memberontak ini ia tidak bererti pergelutan dalaman atau psikologi seseorang individu itu semata-mata. Semestinya bukan penceritaan psikonalisis dan ungkapan metafora-metafora penyeksaan dalaman hati dan minda yang berapung-apung di awangan. Tidak sama sekali. Dan ternyata sekali bukan naratif-naratif kisah harian seseorang Don Juan dengan gadis-gadis yang berjaya dijinakkannya dan dalam proses itu menemui dan berjaya merungkai erti makna Phenomenology of Spirit.
Tidak setakat itu. Di sini sastra berpihak kepada golongan yang ditindas, golongan yang dipijak, golongan yang mengalami ketidakadilan, dan golongan yang dilarang daripada bersuara. Ini komitmen sosial sastra kepada masyarakat. Satu ideologi sastra yang komited terhadap kondisi manusia.
Sastra yang dihasilkan mesti memegang kepada dan menegakkan suatu lingkungan minima nilai-nilai universal, yakni nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan manusia dan kesetaraan gender. Dalam konteks Malaysia, ini bermakna menyatakan pendirian kita untuk menolak segala jenis; layanan dan dasar yang berlandaskan kaum, keistimewaan yang dikuasai hanya oleh kaum bangsawan, pentakrifan agama yang sempit, dan diskriminasi berasaskan gender.
Sekiranya ada pemberontakan atau revolusi, mesti ada individu-individu dan kelompok-kelompok yang mendorong gerakannya. Di Russia, sekitar kurun ke-19 adanya Vissarion Belinsky, Alexander Herzen, Nikolay Chernyshevsky, Mikhail Bakunin, dan Ivan Turgenev. Kalau di Indonesia pada 1940an dan sekitarnya ada Sutan Alisjahbana, Chairil Anwar, Pramoedya Ananda Toer dan Sitor Situmorang.
Di tanah air ini, pada suatu ketika dahulu, wujud juga kelompak ini. Golongan muda yang mempunyai keberanian moral dan semangat untuk mengibarkan panji kebebasan dan keadilan melawan golongan feudal-beraja, penjajah dan ketidaksetaraan masyarakat. Antaranya Keris Mas, Ahmad Boestamam, Asraf dan Usman Awang.
Meskipun begitu, kita telah lupa akan tradisi ini. Betapa jauhnya dan dalamnya kita telah hilang memori melawan yang berpangkal dalam budaya masyarakat Malaysia dari dulu lagi. Banyak lagi yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang cergas, bertenaga, melawan, dan berselera – bukan untuk mengejar nama, populariti atau kekayaan, tetapi kerana itu satu-satunya pena sahaja yang ada di tangan kita.
Posted: 18 Feb 2013 04:02 AM PST
Demoralize, Destabilize, Crisis, and Renormalization.
KGB AGENT: How To Brainwash A Nation
Posted: 18 Feb 2013 03:56 AM PST
ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၊ မျိုးချစ်ပါတီ၊ ကရင်ဗဟိုအဖွဲ့၊ ရခိုင်အမျိုးသား ကွန်ဂရက်၊ ဗမာမွတ်စလင် ကွန်ဂရက်၊ ကရင်လူငယ်အဖွဲ့၊ မွန်အစည်းအရုံး၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ ဆင်းရဲသား ဝံသာနုအဖွဲ့၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်များအဖွဲ့စတဲ့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် ဦးဆောင်အဖွဲ့ပေါင်း (၁၅)ဖွဲ့ တက်ရာက်ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၆ ဇန္နဝါရီလ(၁၇)မှ (၂၃)အထိ ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံတွင် ကျင်းပသော ဖဆပလ နိုင်ငံလုံးကျွတ် ညီလာခံကြီးသည် အနာဂတ် လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်ဝိညာဉ်၊ ပင်လုံကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မိခင်ဆိုတာကို အလေးအနက်ထား သိရှိသူ နည်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ခုနှစ်ရက်တိုင် ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဲဒီညီလာခံကြီးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်း (၈)ခု ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ရှမ်းပြည်၊ ချင်းတောင်၊ ကချင်တောင်တန်းဒေသများမှ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဗမာခေါင်းဆောင်များကသာ (ဗြိတိသျှ စွက်ဖက်မှု မပါဘဲ)လွတ်လပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ခွဲရေး၊ တွဲရေးကို ဆုံးဖြတ်ရမည်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ်(၇)ကိုသာ မချမှတ်နိုင်ခဲ့ရင် ယနေ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာဖို့မရှိဘဲ ရှမ်းပြည်၊ ကချင်ပြည်၊ ချင်းပြည်၊ ကယားပြည်တွေမပါတဲ့ တစ်ခြမ်းပဲ့ မြန်မာနိုင်ငံငယ်ကလေးသာ ဖြစ်သွားနိုင်တာက ငြင်းမရတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ ညီလာခံသည် အနာဂတ် လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု ညီလာခံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ (အဆို(၇)ကို ပင်လုံပိသုကာ တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဗမာမွတ်စလင်ကွန်ဂရက် ကိုယ်စားလည် ဦးဖေခင်က တင်သွင်းခဲ့တယ်။)
ဒီတိုင်းပြုပြည်ပြု ညီလာခံကြီးမှာဘဲ ဆရာကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချို တင်သွင်းခဲ့တဲ့ အဆိုအမှတ်(၆)မှာ ဗမာမွတ်(စ)လင်များကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်းကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဗမာမွတ်စလင်တွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အခုလို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရပါသလဲ။
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာကစခဲ့တဲ့ သခင်အမည်ခံ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အင်မတန် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် မှန်ပါတယ်။ သို့သော် သခင်လှုပ်ရှားမှုအစမှာ ဗမာတွေက ရဲရဲတောက် အလုံးအရင်းနှင့် သခင် သခင်မ အမည်တွေခံပြီး အင်္ဂလိပ်ကို အံတုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်တော့ တက်တက်စင်အောင် လွဲပါတယ်။ သခင်ပေါက်စ ထောင်ခြောက်လလို့ အလှောင်အပြောင်ခံခဲ့ရတဲ့ သခင်ဘွဲ့ခံသူတွေဟာ အထင်သေးခံ၊ နှာခေါင်းရှုံ့ခံရတဲ့၊ အချိန်မရွေး ပုလိပ်အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့၊ သမီးရှင်တွေ နှာခေါင်းရှုံ့တတ်တဲ့ ပျက်ရယ်ပြုခံ လူတန်းစားတစ်ရပ် အမှန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာလမျိုးမှာလည်း မြန်မာမွတ်စလင် သခင်တွေ အများအပြား ပေါ်ထွက်ခဲ့ရုံမက ဒို့ဗမာမွတ်စလင် အစည်းအရုံးကိုပင်တည်ထောင်ပြီး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အခြားသခင်များနှင့် ရင်ဘောင်တန်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ့ရင် ဆလံပေး၊ အလေးပြူရတဲ့ ခေတ်ကြီး(ဦးနုရဲ့ တာတေစနေသား)မှာ၊ တက္ကသိုလ်က အခမ်းအနားတွေ၊ အစည်းအဝေးတွေမှာ God Save the King သီဆိုပြီးမှ ဖွင့်လှစ်ရပြီး အင်္ဂလိပ်ကို ဘုရားထူးနေရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဗမာမွတ်စလင် ကိုထွန်းစိန် (တကသ ဥက္ကဌ)က ဒီကျွန်သီချင်းကို မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ငါတို့ဟာ သခင်တွေဖြစ်လို့ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ သခင်သီချင်းကိုဘဲ ဆိုရမယ်လို့ ကျောင်းသားအစည်းအဝးမှာ ပထမဆုံး အဆိုတင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ အဲဒီကစပြီး တက္ကသိုလ်အခမ်းအနားတွေမှာ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး သီချင်းကိုသာ အစဉ်အဆက် သီဆိုကြပါတော့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်က ဂျပန်နှင့်အတူ မြန်မာပြည်ကို ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် မရှေးမနှောင်းမှဘဲ ဂျပန်ရဲ့ ဂတိမတည်၊ ရက်စက်ယုတ်မာမှုတွေကြောင့် ဂျပန်ကိုပြန်ချဖို့ ဖဆပလ(ဆတပလ)ကို လျှို့ဝှက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အထက်ဗမာပြည်ကို ဦးဆောင်ဖို့ မန္တလေးခရိုင် ဖဆပလအတွက် ခေါင်းဆောင် ရှာခဲ့ကြတယ်။ အထက်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ ထင်ရှားသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆေင်များကို ဥက္ကဌတာဝန်ယူဖို့ လက်လှမ်းမီရာ ချဉ်းကပ်စည်းရုံးခဲ့တယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို အံတုမဲ့ မြေအောက် သူပုန် ဖဆပလ ဥက္ကဌနေရာကို ယူဝံ့သူ မရှိခဲ့ကြဘူး။
မင်းတို့ အစိုးရကျောင်းက အိုင်စီအက်စ်(Indian/Imperial Civil Service အင်္ဂလိပ်သစ္စာတော်ခံ အရာရှိ) တစ်ယောက်ထွက်ရင် ငါ့အမျိုးသားကျောင်းက လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် သူပုန်ဆယ်ယောက် ထွက်စေရမယ်ဟေ့လို့ ကြုံးဝါးခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်က လူတကာ မလုပ်ရဲတဲ့ ဖဆပလ ဥက္ကဌတာဝန်ကို ကြေကြေနပ်နပ်ကြီး ယူခဲ့ပြီး ဓါးသွား(ဖက်ဆစ်)ပေါ်က ပျားရည်စက်(လွတ်လပ်ရေး)ကို ရဲရဲကြီး လျှက်ခဲ့တယ်။ (အခုတော့ ကုလားလူလိမ် ရာဇတ်ဆိုပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်တွေမှာ စော်ကားလာကြပါပြီ။)
ဂျပန်ပြေး၊ အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်ပြီး သခင်တွေ၊ ဘီအိုင်အေတွေ ခေတ်ကောင်းတော့ လူတိုင်း သခင်ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ တစ်မတ်ပေးရင် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် သခင်လက်မှတ်ရတာမို့ တစ်မတ်သခင်လို့တောင် ခေါ်လာကြပြီ။ ဖဆပလကလည်း ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်လာတယ်။ ဖဆပလ တန်ခိုးထွားလာတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ မဟာတစ်ချို့က ဆရာကြီးဦးရာဇတ် ကုလားဖြစ်ကြောင်း သိလာကြဟန်တူပါတယ်။ ကုလားကြီး ဦးရာဇတ်ကို မြန်မာ့ဦးစွန်း နေပြည်တော် အထက်မြန်မာပြည်ရဲ့ ဖဆပလ ဥက္ကဌနေရာ မခန့်သင့်ဘူးလို့ ကန့်ကွက်ကြပါတော့တယ်။ သံဃာတော်များအပါအဝင် ရဟန်းရှင်လူတွေက ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်တုန်းက အသေခံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်ကလွဲပြီး ဘယ်သူကိုတင်တင် လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ပယ်ချခဲ့ကြတယ်။ ဒါက သမိုင်းပါ။
ကုလား၊ ပသီ၊ ဇေတဘာဒီ၊ မြန်မာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ အမည်တွေဟာ ကျောက်စာတင် သမိုင်းဝင် စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် စတည်ထောင်တဲ့ လွန်ခဲ့သော နှစ်တစ်ထောင်ကျော်ကပင် တည်ရှိခဲ့တဲ့ တိုင်းကျိုးပြည်ဆောင်၊ တိုင်းပြု ပြည်ပြု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာပြည်သားတွေကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာ ပတ်စ်ပို့နှင့် ခုန်ချလာသူ၊ မလွယ်ပေါက်က ခိုးဝင်လာသူ၊ မနေ့တနေ့ကမှ နိုင်ငံသားအဖြစ် ကျမ်းကြိမ်ခဲ့သူတွေ တစ်ယောက်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိသိကြီးနှင့် မိမိကိုယ်ကို အိမ်ရှင်အတင်းလုပ်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ အခုမှ ဧည့်သည်သဖွယ်၊ နိုင်ငံခြားသားသဖွယ် ခွဲခြားဆက်ဆံနေကြတာလဲ။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို နိုင်ငံခြားဘာသာလို့ ဆိုလာရတာလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံခြားက မလာတဲ့ ဘာသာရှိလို့လား။ မသိလို့ မရှက်တာလား။ မရှက်တတ်လို့ဘဲ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြတာလား။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ ဦးစောနန်းရင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူစဉ်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာပြည်သားတွေကို မြန်မာမွတ်စလင်အဖြစ်သာ တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ဖို့၊ ၁၀နှစ် တစ်ကြိမ်ကောက်သော သန်းခေါင်စာရင်းတွင်လည်း မြန်မာမွတ်စလင်အဖြစ်သာ ကောက်ယူဖို့ အမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။
၁၉၆၀လောက်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက မြန်မာမွတ်စလင်ဆိုတာက ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးအမည်ကို တွဲဖက်ထားခြင်းဖြစ်၍ မသင့်လျော်သဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်လို့ မသုံးကြဘဲ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သော မြန်မာတွေ၊ မြန်မာလူမျိုးအဖြစ်သာ ခေါ်ဝေါ်ဖို့၊ လက်ခံဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဦးနု ထောက်ပြချက်က မှန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာ၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်စေလိုသူနှင့် ပသီဟူ၍ ခေါ်စေလိုသူဆိုပြီး မြန်မာမွတ်စလင်အုပ်စုအတွင်း အကြမ်းအားဖြင့် အယူအဆနှစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။
မရှေးမနှောင်းမှာဘဲ ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက အာဏာသိမ်းလိုက်တော့ တိုင်းရင်းသားရေး၊ ပြည်ထောင်စုရေး အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးတွေ အားလုံးရပ်သွားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး နောက်ပြန်ဆုတ် အမှောင်တိုက်ကျခဲ့ရတယ်။ မြန်မာလား၊ ပသီလား၊ မြန်မာမွတ်စလင်လားဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေဟာ မတင်မကျနဲ့ ယနေ့ထိအောင် ရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကုလားဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးက ခေါင်းပြန်ထောင်လာခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား (၁၄၄)မျိုးရှိတယ်လို့ ဗိုလ်နေဝင်းက သတ်မှတ်ပြီး၊ ဗိုလ်စောမောင်က (၁၃၅)မျိုးလို့ သတ်မှတ်တယ်။ အခု ဒီမိုကရေစီ ဗိုလ်ဦးခင်ရီက (၁၀၁)မျိုးလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ထူးဆန်းတာက တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကို တစ်ခါဘူးမျှ ချပြဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်ဘဲ အာဏာရှင်များကသာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီး တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်နှင့် သတ်မှတ်တာချည်းဘဲ ဖြစ်နေတယ်။ ပိုထူးဆန်းတာက တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက် ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်းကို အုပ်ချုပ်သူများက အခုလိုအကြိမ်ကြိမ် တာဝန်မဲ့ ထင်ရာစိုင်း ပြဌာန်းနေတာကို ဝတ်ကြေတန်းကြေ ကန့်ကွက်ရုံအပြင် ဘယ်တိုင်းရင်းသားကမှ အလေးအနက်ထားဟန် မတွေ့ရတာဘဲ။
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း သတ်မှတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား(၁၄၄)မျိုးမှာ မြန်မာမွတ်စလင်ပါသလို၊ ဦးနုခေတ်က တိုင်းရင်းသား သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိုလည်း ရခိုင်စစ်တကောင်းအဖြစ် ထဲ့သွင်းထားတယ်။ ရှစ်လေးလုံးအပြီး အာဏာသိမ်းတက်လာတဲ့ ကျန်စစ်သားမင်း ဗိုလ်စောမောင်က ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ (၁၄၄)ကို မာရှယ်လောနှင့် (၁၃၅) လုပ်လိုက်တယ်။ တိုင်းရင်းသား(၉)မျိုးကို ဘယ်ချောင်မှာ လူမသိ သူမသိ သတ်ပစ်လိုက်သလဲ မသိပါဘူး။ (၁၄၄)တုန်းက တရုပ်ဖြစ်လို့ ချန်ထားခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်ကို (၁၃၅)မှာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီး ထည့်လိုက်ပြန်သေးတယ်။ အခု ဒီမိုကရေစီ ဗိုလ်ခင်ရီက (၁၃၅)ကနေ (၁၀၁) လူမျိုးအဖြစ် ဒီမိုကရေစီလွှတ်တော်ကို ဘေးချိတ်ပြီး သတ်မှတ်လိုက်ပြန်တယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ပေါက်တတ်ကရတွေ လုပ်နေသလဲဆိုရင် အဲဒီဗိုလ်ခင်ရီရဲ့ လူမျိုး(၁၀၁)မျိုးထဲမှာ ဇိုမီးမပါတော့ ဇိုမီးပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ထောင်ဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ ဇိုမီးက တင်းခံတော့ ဇိုမီးကို တိုင်းရင်းသားပြန်ဖြစ်စေ လုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒါဆို တိုင်းရင်းသား (၁၀၂)မျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇိုမီးကို ထပ်တိုးပြီးလဲ တိုင်းရင်းသားက (၁၀၁)မျိုးဘဲလို့ ထပ်ပြောပြန်တယ်။ ဒါဆို (၁၀၁)မျိုးထဲက ကံဆိုးသူမောင်ရှင် ဘယ်လူမျိုးကို မျိုးဖြုတ်လိုက်ပြီး ဇိုမီးကို အစားထဲ့ခဲ့သလဲ။ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)ကနေ(၁၀၁)လုပ်တုန်းက ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုသူက ဘယ်လူမျိုး (၃၄)မျိုးကို လူမသိ သူမသိ Genocideလုပ်လိုက်သလဲ။ တိုင်းရင်းသားဖြစ်စေ မဖြစ်စေကို အပျင်းပြေ ဂေါက်သီးရိုက်နေတယ်လောက် အောင်းမေ့နေတဲ့ ရှက်ကြောပြတ်နေသော အာဏာရှင်များက နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို အလေးထားပါတယ်ဆိုတာကို ယုံတဲ့သူတွေက ယုံနေဆဲပါ။ ဒို့မြန်မာပြည်ဖြစ်ပါတယ်။
မေးစရာ ဆက်ဖြစ်လာတာက လူမျိုး(၁၀၁)ပါးဆိုတာကကော ဘာသဘောလဲ။ ဇိုမီးမရှိခင်က (၁၀၁)မျိုး၊ ဇိုမီးကို ပြန်ထဲ့ပြီးလဲ ဘာကြောင့် (၁၀၁)ဘဲ ဘာကြောင့် ဖြစ်နေရတာလဲ။ တစ်ရာ့တစ်ပါးသောမင်းတွေ ပဏ္ဍာကြို့ရတဲ့ ဗမာထီးဆောင်းမင်း လုပ်ချင်နေတုန်းဘဲလား။ အရင်ရောဂါဟောင်းက အကင်းမသေသေးဘူးလား။ ဒါလား ဒီမိုကရေစီ။ ဒါလား တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အလေးထားတာ။
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးနှင့် တိုင်းပြုပြည်ပြုရေးတွေဖြစ်တဲ့ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ပညာရေး၊ အနုပညာ၊ အားကစား၊ စီးပွါး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ရှစ်လေးလုံး၊ ရွှေဝါရောင် သံဃာအရေးအခင်းစတဲ့ ကဏ္ဍစုံမှာ မြန်မာမွတ်စလင် မပါခဲ့တဲ့နေရာ ရှိရင် ထောက်ပြပါ။ တိုင်းပြည်ကို ဆူပူအောင်၊ အကျိုးပျက်အောင်၊ အကြမ်းဖက်အောင်၊ မငြိမ်းချမ်းအောင်၊ မတိုးတက်အောင်၊ မစည်းလုံးအောင် မြန်မာမွတ်စလင်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ ထောက်ပြပါ။ တိုင်းပြည်က တောင်းဆိုတဲ့အခါ မိမိရဲ့ အသက် သွေး ချွေးပေးဆပ်ရာမှာ မြန်မာမွတ်စလင်တွေ နောက်တွန့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လဲ ထောက်ပြလိုက်ပါ။
၁၉၄၇ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၁)ရက်နေ့ ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ်မထိုးမီညမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဂတိပြုပြောကြားခဲ့တာက
- – - ရှေးခေတ်က အော်လာကြတဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို လက်သုံးပြုလို့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ ဗမာ၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်းနှင့် အခြားအမျိုးများလဲ ရှိသေးတယ်။ – - – သာသနာဆိုတာကတော့ ကိုယ်ကိုးကွယ်ချင်တဲ့ ဘာသာ သသနာကို ကိုးကွယ်နိုင်ကြတာဘဲ။ ဗမာပြည်မှာ လူများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ၊ မဟာမေဒင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ အမျိုးမျိုး ရှိတာဘဲ။ သည်တော့ ဒါတွေကိုစွဲပြီး လူမျိုးရေးတရား လုပ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ – - -(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းများ၊ စာပေဗိမာန်)
- – - ဒီမှာဆရာ၊ ကျနော်တို့က လူကြိုက်အောင် လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလို မဟုတ်မဟတ်ကို စိတ်ထင်ရာတွေ ရှောက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးဟာ မကြာခင် ပျက်စီးပြိုကွဲပြီး ကျွန်သဘောက် ဖြစ်သွားကြမှာဘဲ။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာ အလောင်းဘုရားလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့ကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေရှိတယ်။ ဘရင်ဂျီတွေ ရှိတယ်။ အစကတည်းက ရှိလာခဲ့ကြတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ တောင်တန်းသားတွေ ရှိတယ်။ တချို့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ပြီး အရိုးစွဲနေကြတာတွေ ရှိတယ်။ သူတို့တွေဟာလဲ အားလုံး နိုင်ငံသားတွေဘဲ။ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်တွင်းက လွတ်အောင် တိုက်ထုတ်ကြတုန်းက ကျနော်တို့ချည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့တတွေပါ ပါကြပါတယ်။အခုကျွန်တွင်းက လွတ်မယ်မှ မကြံသေးဘူး၊ သူတို့တတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ပြီး ငါတို့လူများစုရဲ့ ဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ရမယ်လို့ လုပ်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့ဟာ ခွေးလောက်တောင် သောက်သုံးမကျတဲ့အကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြမှာပေါ့။ ဆရာ တိုင်းပြည်ကို တိုင်းပြည်ရေးလို့ တွေးစမ်းပါ။ ဘာသာတွေ ဘာတွေ ညာတွေ လုပ်မနေပါနဲ့။ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး စည်းရုံးနေဖို့လိုတယ်။အမျိုး၊ ဘာသာ သာသနာဆိုတာတွေဟာ ရှေးရှေး ပဒေသရာဇ်မင်းတရားကြီးတွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဘဝင်လေပင့်ပြီး ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပါ။ အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့လိုကြတာက ပြည်ထောင်စုကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ လူမျိုးအားလုံး ဘာသာအားလုံး ဘယ်တော့မှ မပြိုကွဲသွားဘဲ ခွဲထွက်သွားမဲ့သူတွေ ပေါ်မလာစေဘဲ နိုင်ငံစိတ်ဓါတ် တစ်ခုထဲရှိနေအောင် သွင်းပေးဖို့ စည်းရုံးပေးဖို့ လိုနေတယ်။နိုင်ငံတော်ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ချင်ရင် ဆရာကိုယ်တိုင် ဘဝရှင်မင်းတရားကြီး အမည်ခံပြီး သာသနာ့ဒါယကာတော် တက်လုပ်။ ပြီးတော့ စည်ကုံးခရိုင်နှင့်တကွ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်တော်မူသော သီရိပရဝဓမ္မရာဇာ ဘဝရှင်မင်းတရားကြီး သာသနာ့ဒါယကာ ဘချို၏ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့ ဆရာ့ဟာ ဆရာကြေညာ၊ ကျနော် မပါဘူး။ – - – (နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုသို့ ပြောကြားချက်- မီးဒုတ်သတင်းစာ၊ စက်တင်္ဘာ ၂၊ ၁၉၆၀)
၁၉၄၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊ ၁၉၄၈ခုနှစ်နှင့် ၁၀၉၇၄ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေများအရ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီးသူ မြန်မာမွတ်စလင်များသည် ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများ၊ သံသယများ၊ နိုင်ငံမဲ့များ၊ ဧည့်သည်များ၊ ဧည့်နိုင်ငံသားများသဖွယ် ဆက်ဆံခံနေရလာတယ်။ မွတ်စလင်ဖြစ်လျှင် မြန်မာမဖြစ်ရဟု လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် ဥပဒေများကို သိက္ခာမဲ့စွာ ချမှတ် ကျင့်သုံးလာတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသား မောင်မောင်တာသည် မွတ်စလင်ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ခွင့် မရှိ။ ဘင်္ဂလီ-မြန်မာဟု မှတ်ပုံတင်တွင် စာရင်းသွင်းခံလိုက်ရတယ်။ သူ့ညီအရင်းကမူ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သဖြင့် မြန်မာဖြစ်ခွင့် ရရှိသွားသည်။ တစ်မိ တစ်ဖရင်းမှ မွေးဖွားသူများကိုပင် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အပေါ်အခြေခံပြီး လူမျိုးအမည်ကို ဗလောင်းဗလဲ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်နေသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တစ်ခုတည်းသော ထူးဆန်းသည့် အူကြောင်ကြောင် နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်စွန့် တိုက်ပွဲဝင်တုန်းက တို့အားလုံး၏ နိုင်ငံဟု ဆိုခဲ့ကြပြီး လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် နင်တို့ မပါ၊ ငါတို့သာ ပိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ် သူရဲဘောကြောင်သူ ကြောင်သူတော် မဟာများက မရှက်မကြောက် ဆိုရဲလာသည်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိဘ၊ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်က ဆင်းသက်လာခဲ့ကြသော ကျနော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်များတွင် ချစ်ရန်၊ သေရန်၊ အသက်စွန့်ရန် ဇာတိချက်ကြွေ အမိမြန်မာနိုင်ငံမှတစ်ပါး အခြားမရှိပါ။ မြန်မာပြည်သည် ဒို့ပြည်။ မြန်မာစာသည် ဒို့စာ။ မြန်မာစကားသည် ဒို့စကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုသည် ဒို့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ မွေးရာပါနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ဦးသိန်းစိန်က ပေးမှ၊ ဦးသိန်းညွန့်က သဘောတူမှ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ခွင့်ပြုမှ၊ ၁၉၈၂နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှ၊ ၂၀၁၄ခု သန်းခေါင်စာရင်းတွင် အမည်မှန်ထဲ့ပေးမှ ရရှိမည်ဟု လုံးဝ မယုံကြည်ပါ။
ကျနော်တို့၏ မွေးရာပါအခွင့်အရေးကို စာနာနားလည်မှုရှိသော ပြည်ထောင်စုသားများနှင့် လက်တွဲ၍ ကာကွယ်သွားမည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာမွတ်စလင်များကို ဖိနှိပ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မှန်သမျှကို တည်ဆဲဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ဆန့်ကျင်သွားမည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သော မြန်မာများ၏ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို အပြည့်အဝ အသိအမှတ်ပြု ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။ မြန်မာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံက ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကျနော်တို့၏ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်မှု၊ ကိုးကွယ်မှု၊ အသက်ရှင် ရပ်တည်မှု၊ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ပြီးပြည့်စုံစေရမည်။
Source: သေဖေါ် သေဖက်ပါ။ ရှင်ဖေါ် ရှင်ဖက် မဟုတ်ဘူးလား By အောင်တင်
နိုဝင်္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂
Posted: 18 Feb 2013 03:57 AM PST
Time to send in the army's elite butt squad - edit. COMMENT 'The Sulu Sultanate invasion of Lahad Datu.' This is the term I consider most appropriate to define the standoff between some 100 heavily armed intruders from the now defunct Sultanate of Sulu and the Malaysian security forces in Kampung Tanduo in Lahad Datu. The intruders have made clear that they are there to stay for as long as necessary and more of their kind will be joining them to claimapiece of Sabah that they perceive to belong to their ancestors.
They have also made it clear they are not going to budge, even when threatened with deportation. If the first batch of 100 or more can infiltrate into our territories without being detected by our security forces, then their back-up forces can row their boats across easily, without any resistance as well.
There was, without any doubt,asecurity lapse in Sabah waters. There wouldn't have been an intrusion of such magnitude otherwise. If we are expecting the Philippines Armed Forces to assist us in preventing them from coming here, we might as well forget it. If we played them out at the last minute in handing over Manuel Amalilio , the most wanted conman who has allegedly cheated some 15,000 Filipinos of almost RM1 billion, then we cannot expect sincere cooperation from them.
While it is not wrong for some BN MPs to question Senator Nick Xenophon's role in visiting Malaysia, it is also not wrong for Malaysians to demand that both the defence minister and the home affairs minister explain the security lapse in Sabah waters that resulted in the Kampung Tandou standoff. We have lost Pulau Batu Putih (Pedra Branca) to Singapore due to the carelessness and lapse of alertness by some civil servants.
We cannot afford to lose any more of our lands, surrender our sovereignty to criminals or show our weaknesses. Not so different from Sauk incident There's not much difference between the standoff in Kampung Tandou, Lahad Datu, and the one that took place in Bukit Jenalik, Sauk, Perak, in July 2000. The only difference is in the numbers. There were less than 30 in the Sauk incident while there are now at least 100 in Kampung Tandou and more are expected to join them.
If the Sauk case was classified as "waging or attempting to wage war against the Yang di-Pertuan Agong,aRuler or Yang Dipertua Negeri", which is an offence against the state, then the citizens can demand the same law be applied to the Sulu invaders. If our own citizens involved in the Sauk incident can be forcibly disarmed and even killed by the security forces and later charged in the court of law andafew eventually hanged, then the rakyat has the right to voice their outrage should the prime minister, who was the defence minister during the Sauk incident, treat the Sulu invaders with kid gloves.
Attorney-General Abdul Gani Patail, who hails from Lahad Datu, Sabah, and who had about two weeks ago promised to take action on the illegal immigrants in Sabah since that is his state, would be failing in his duty should he not advise the Yang di-Pertuan Agong and the prime minister that there are provisions in the Penal Code to deal with those armed criminals from Sulu holed up in Kampung Tandou. After all Gani, as one of the lead prosecutors in the Sauk incident, will surely remember the ingredients needed to prove this case.
Should the actions taken against those armed intruders in Kampung Tanduo be less severe than those imposed against our own citizens in the Sauk incident, then the actions shall be deemed to beadisgraceful, treacherous and cowardly act by the prime minister. Malaysiakini
"Tetapi semalam beliau diusir balik ke Australia. Sebabnya Umno BN takut Xenophon kesan penipuan daftar pemilih SPR.
"Umno kata kerajaan United Kingdom pun hantar keluar pendatang (haram). Apa persamaan pendatang haram dengan Senator Xenophon?" katanya pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina Selangor di Kompleks One Utama di sini, hari ini.
"Presiden Filipina, Benignio Aquino buat kenyataan, desak pihak berkuasa Malaysia serahkan Amalilio agar beliau dapat disiasat dan didakwa.
"Peguam Negara (Tan Sri Abdul Gani Patail) cepat-cepat suruh tangkap. Dalam tempoh dua hari, terus dipenjara. Ini perbicaraan paling cepat di dunia," katanya, sinis.
"Jadi, seorang senator tidak boleh masuk (Malaysia), penjenayah curi RM900 juta pula diberi perlindungan di Sabah?" katanya disambut sorakan hampir 5,000 hadirin.
"Jelas kita gagal untuk mendapatkan persetujuan kerajaan Malaysia untuk membenarkannya tinggal di Malaysia.
"Kita akan terus mengejar isu ini dengan kerajaan Malaysia," kata Gillard di Melbourne hari ini, dilapor agensi berita, AFP.
Beliau juga 'terkejut dan kecewa' terhadap Malaysia mengatakan Canberra membuat 'tanggapan segera dan berat' berhubung pengusiran Xenophon.
"Kami tidak berhasil mendapatkan persetujuan pemerintah Malaysia agar ia (Xenophon) tetap di Malaysia.
"Kami akan terus membahas masalah itu dengan pemerintah Malaysia," kata Gillard dalam akhbar Indonesia, Republika online yang turut mengutuk deportasi ke atas Xenophon.
"Ia bukan tidak rasmi," kata Xenophon dilapor radio ABC di Australia.
"Ia adalah perjumpaan di mana keputusannya akan dibawa ke parlimen persekutuan berkenaan lawatan itu nanti," katanya lagi.
"Nampaknya, satu-satunya risiko adalah untuk saya memalukan kerajaan Malaysia atas sokongan saya pada pilihan raya bebas di Malaysia," katanya dipetik.
Kid loves the 'fried crispy tau foo' with 'green tea sauce'.
Just soup and rice: Simply yummy.
Posted: 18 Feb 2013 12:46 AM PST
Posted: 18 Feb 2013 12:32 AM PST
၁၄.၂.၁၃ နေ့က လာစစ်ဆေးပြီး စည်းကမ်းနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါလို့ပြောသွားတဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းက ဒီနေ့ ၁၇.၂.၁၃ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်ကြီးမှာ ဘောင်ကျော်လို့ ချက်ချင်းဖျက်ပေးပါလို့ဆိုပြီး စာထုတ်လိုက်တာ ဖတ်ရတော့ အံ့သြမိတယ်ဗျာ။ အဲဒီစာကြောင့် ဆယ်အိမ်မှူးက ဦးဆောင်ပြီးဖျက်ကြတယ်တဲ့။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးကလည်း ကြွရောက်ကာ ခါးထောက်ကြည့်ပြီး အားပေးခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ အဖျက်သမားတွေကို မည်သူမျှအနှောင့်အယှက်မပြုနိုင်ရန် ရဲဝန်ထမ်းများက အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျား။